Nabadoon cusub oo lagu caleemosaaray Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandNabadoon cusub oo lagu caleemosaaray Garoowe
Nabadoonka cusub ee la caleemosaaray, nabadoon Axmed Cumar Kaatum. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Nabadoon cusub oo kamid ah nabadoonada dhaqanka ee gobolka Nugaal ayaa la caleemosaaray.
Nabadoon Axmed Cumar Kaatum ayaa lagu caleemosaaray beer dalxiiseedka Darayle Resort Centre oo kutaala deegaanka Darayle oo qiyaastii 7-km dhanka koonfureed ka xiga caasimada Puntland ee Garoowe.
Hoggaamiye dhaqameed aad looga ixtiraamo gobolka Nugaal iyo Puntland oo dhan oo ay kamidyihiin Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaase iyo sidoo kale masuuliyiin katirsan dowladda Puntland oo ay ku jiraan wasiiro iyo xildhibaano ayaa ka qeybgalay munaasabada caleemosaarka nabadoonka cusub.
Islaan Ciise iyo Suldaan Garaase oo munaasabada caleemosaarka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay nabadoonka cusub iyaga oo Alle uga baryay in masuuliyada cusub ee loo wakiishay uu ku asturo.
Nabadoonka cusub ee la caleemosaaray oo hadal kooban goobta kasoo jeediyay ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono nabada iyo horumarka dad-weynaha reer Nugaaleed iyo dhammaan Puntland oo dhan.
Ugu dambayn, munaasabada oo ahayd mid qurux badan oo si heer-sare ah loo soo agaasimay ayaa ku soo dhammaatay jawi degan iyo is marxabayn.
June 15, 2017 Kalafadhiga 39-aad ee Baarlamaanka dowladda Puntland oo ka furmay caasimada Garoowe
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali electoral commission declared on Sunday that it had set the date of elections of the country. Speaking with journalists in Mogadishu, the chairman of electoral commission, Abdullahi Mohamed Omar said that all [...]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s information minister has said on Saturday that the Somali political leaders will hold meeting in Mogadishu next week. Minister Mohamed Abdi Mareye told Somali national news agency (Sonna) that the meeting about [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in uusan wax mushahaar ah qaadan tan iyo markii la doortay, Wareysi gaar ah oo uu siiyay wargeyska Sharq Al-awsat Madaxweynaha ayaa la weydiyay in markii [...]